November — RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower
es21 pp. 108-118
Kuongorora Magwaro Zuva Nezuva—2021
Muvhuro, November 1
Chipiri, November 2
Chitatu, November 3
China, November 4
Chishanu, November 5
Mugovera, November 6
Svondo, November 7
Muvhuro, November 8
Chipiri, November 9
Chitatu, November 10
China, November 11
Chishanu, November 12
Mugovera, November 13
Svondo, November 14
Muvhuro, November 15
Chipiri, November 16
Chitatu, November 17
China, November 18
Chishanu, November 19
Mugovera, November 20
Svondo, November 21
Muvhuro, November 22
Chipiri, November 23
Chitatu, November 24
China, November 25
Chishanu, November 26
Mugovera, November 27
Svondo, November 28
Muvhuro, November 29
Chipiri, November 30
[Onai] vamwe sevakuru kwamuri.—VaF. 2:3.
Mazuva ano, vanhu vakawanda vanoonekwa sevakachenjera vanoshora zvinotaurwa neBhaibheri panyaya yekuzvikoshesa. Vanoti kuona vamwe vanhu sevakuru kwauri kunoita kuti vakudzvinyirire. Asi maonero anokurudzirwa nenyika yaSatani ari kuguma nei? Vanhu vanongozvifunga ivo pachavo vanofara here? Vane mhuri dzinofara neshamwari dzechokwadi here? Vane ushamwari hwepedyo naJehovha here? Kubva pane zvawakaona, ndechipi chine magumo akanaka, kutevera uchenjeri hwenyika ino kana kuti uchenjeri huri muShoko raMwari? (1 VaK. 3:19) Vaya vanoteerera mazano evanhu vanoonekwa nenyika sevakachenjera vakafanana nemunhu anenge arasika anobvunza nzira kumunhu anenge arasikawo. Jesu akataura nezvevarume vainzi vakachenjera vepanguva yaakararama achiti: “Ivo mapofu anotungamirira vamwe. Saka kana bofu rikatungamirira rimwe bofu, ese ari maviri achawira mugomba.” (Mat. 15:14) Zvechokwadi uchenjeri hwenyika ino upenzi kuna Mwari. w19.05 24-25 ¶14-16
Dzichaunganidza vanhu vake vaakasarudza.—Mat. 24:31.
Mumakore achangopfuura, nhamba yevaya vanodya paChirangaridzo yanga ichiwedzera. Tinofanira kunetseka nazvo here? Aiwa. “Jehovha anoziva kuti vake ndevapi.” (2 Tim. 2:19) Hama dzinoverenga vanhu vanodya paChirangaridzo dzakasiyana naJehovha pakuti hadzizivi kuti vakazodzwa chaivo ndevapi. Saka nhamba iyi inosanganisira vaya vanofunga kuti vakazodzwa asi ivo vasina. Vamwe vaimbodya vakazorega. Vamwe vanogona kunge vachirwara nepfungwa zvekuti vanopedzisira vava kufunga kuti vachanotonga naKristu kudenga. Saka hatinyatsozivi kuti panyika pasara vakazodzwa vangani. Munzvimbo dzakawanda panyika muchange muine vakazodzwa, Jesu paachauya kuzovatora kuti vaende kudenga. Bhaibheri rinotaura kuti mumazuva ekupedzisira, pachange paine vakazodzwa vashoma vanenge vachiri panyika. (Zvak. 12:17) Asi haritauri kuti panenge pasara vangani pachatanga kutambudzika kukuru. w20.01 29-30 ¶11-13
Mwari akada nyika kwazvo zvekuti akapa Mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga.—Joh. 3:16.
Jesu akaratidza kuti baba vedu Jehovha vanotida zvakadii paakataura nyaya yemwanakomana ainge arasika. (Ruka 15:11-32) Baba vanotaurwa munyaya yacho vaiva netariro yekuti mwana wavo aizodzoka. Paakadzoka, baba vacho vakamugamuchira nemwoyo wese. Kana tikambosiya Jehovha asi tobva tapfidza, tinogona kuva nechokwadi chekuti Baba vedu vane rudo vanoda kutigamuchira. Baba vedu vachagadzirisa zvese zvakakonzerwa nekutadza kwaAdhamu. Pakapanduka Adhamu, Jehovha akasarudza kuti pazova nevanhu 144 000 vachashumira semadzimambo uye vapristi kudenga neMwanakomana wake. Munyika itsva, Jesu nevaachatonga navo vachabvisa chivi pavanhu vanoteerera. Mwari achaita kuti vanhu vanoteerera vararame nekusingaperi pavanenge vakunda muedzo wekupedzisira. Baba vedu vekudenga vachafara pavachaona panyika pazara nevana vavo vasina chivi. Ichange iri nguva inofadza chaizvo! w20.02 6-7 ¶17-19
[Rambai] muchiitwa vatsva pamafungiro enyu.—VaEf. 4:23.
Tese zvedu tinofanira kuzvibvunza kuti, ‘Kuchinja kwandiri kuita kuti nditevedzere Kristu kunongova kwekunze here kana kuti ndiri kunyatsochinja zvandiri nechemukati?’ Mumashoko ake ari pana Mateu 12:43-45, Jesu anotibatsira kuona zvatinofanira kuita. Mashoko iwayo anotidzidzisa chidzidzo chinokosha chekuti hatifaniri kungoperera pakubvisa pfungwa dzakaipa, asi tinofanira kudzitsiva nemafungiro aMwari. Zvinoita here kuti tichinje zvatiri chaizvo nechemukati? Shoko raMwari rinopindura kuti: ‘Pfekai unhu hutsva hwakasikwa maererano nezvinodiwa naMwari mukururama kwechokwadi nekuvimbika.’ (VaEf. 4:24) Saka zvinoita kuti tichinje zvatiri nechemukati, asi hazvisi nyore. Hatifaniri kungogumira pakurwisa zvido zvakaipa uye maitiro asina kunaka. Tinofanira kuchinja ‘mafungiro edu.’ Izvozvo zvinosanganisira kuchinja zvido zvedu, maitiro edu, uye vavariro dzedu. Izvi zvinoda kuti tirambe tichishanda nesimba. w19.06 9-10 ¶6-7
Tiri kuda kuparadza nzvimbo ino.—Gen. 19:13.
Jehovha akanzwira Roti tsitsi ndokutuma ngirozi kuti dzimununure iye nemhuri yake. Asi Roti ‘akaramba achingotenderera-tenderera.’ Ngirozi dzakatozomubata ruoko, dzikamubatsira nemhuri yake kuti vabude muguta racho. (Gen. 19:15, 16) Ngirozi dzakabva dzamuudza kuti atizire kumakomo. Asi pane kuti ateerere Jehovha, Roti akakumbira kuti atizire muguta raiva pedyo. (Gen. 19:17-20) Jehovha akateerera nemwoyo murefu, akabvumidza Roti kuti aende kuguta racho. Nekufamba kwenguva, Roti akatya kuramba achigara muguta racho achibva azoenda kumakomo, kunzvimbo yaainge amboudzwa naJehovha kuti aende. (Gen. 19:30) Izvi zvinonyatsoratidza kuti Jehovha ane mwoyo murefu! Mumwe watinonamata naye anogona kuita chisarudzo chakaipa sezvakaitwa naRoti zvomupinza mumatambudziko akakura. Tinoita sei kana izvozvo zvikaitika? Tinganzwa tichida kumuudza kuti ari kukohwa zvaakadyara, uye ichocho chinenge chiri chokwadi. (VaG. 6:7) Asi tinogona kuita zviri nani pane izvozvo. Tinogona kutevedzera zvakaitwa naJehovha pakubatsira Roti. w19.06 20-21 ¶3-5
Jehovha ndiye mubatsiri wangu; handizotyi.—VaH. 13:6.
Vavengi vedu pavanotirambidza kunamata vanenge vachida kuti titye, torega kushumira Jehovha. Vanogonawo kutoparadzira manyepo nezvedu, kutuma mapurisa kunosecha misha yedu, kutiendesa kumatare, uye kuisa vamwe vedu mumajeri. Vanofunga kuti tichabvunda nekutya nekuti vanenge vaisa vamwe vedu mumajeri. Kana tikatanga kuvatya, tinogona kudzokera shure, kana kutorega kunamata. Hatidi kuita sevanhu vanotaurwa pana Revhitiko 26:36, 37. Hatizoregi kutya kuchiita kuti tiite zvishoma pakunamata kana kutorega kushumira Jehovha. Tinonyatsovimba naJehovha uye hatibvumi kuvhundutsirwa. (Isa. 28:16) Tinonyengetera kuna Jehovha kuti atitungamirire. Tinoziva kuti kana tichibatsirwa naJehovha, hapana kana hurumende ingatitadzisa kunamata Mwari wedu takatendeka. Patinotambudzwa, tine kakutya katinomboita, asi kutambudzwa ikoko kunogona kutotibatsira kuti tiwedzere pane zvatagara tichiita pakushumira Jehovha. w19.07 9-10 ¶6-7
Paridza shoko.—2 Tim. 4:2.
Kunyange zvichiita sekuti hausi kuwana munhu anoda kudzidza, usaneta. Yeuka kuti Jesu akafananidza basa rekuita kuti vanhu vave vadzidzi nerekubata hove. Vanhu vanobata hove vanogona kupedza maawa akawanda vasati vabata kana imwe chete. Vanowanzoshanda kusvika pakati peusiku kana kuti kwava kuedza, uye dzimwe nguva vanofamba madaro akareba nezvikepe. (Ruka 5:5) Izvi ndizvo zvinoitwawo nevamwe vaparidzi. Vanoratidza mwoyo murefu pavanopedza maawa akawanda vachitsvaga vadzidzi munzvimbo dzakasiyana-siyana uye panguva dzakasiyana-siyana. Vanozviitirei? Vanozviitira kuti vave nemikana yakawanda yekuwana vanhu. Kakawanda, vaya vanoshanda nesimba vanowana vanhu vanofarira mashoko edu. Wadii kumboedza kuparidza panguva inowanzowanika vanhu kana kuti panzvimbo yavanowanika. Nei tichifanira kuva nemwoyo murefu patinenge tichidzidza nevanhu Bhaibheri? Chimwe chikonzero ndechekuti tinofanira kubatsira mudzidzi kuti azive uye ade zvinodzidziswa neBhaibheri. Tinofanirawo kumubatsira kuti asvike pakuziva uye kuda Munyori weBhaibheri, Jehovha. w19.07 18-19 ¶14-15
Ndinokanganwa zvinhu zviri shure.—VaF. 3:13.
Vamwe vedu tingada kushanda nesimba kuti tisaramba tichizvipa mhosva yezvivi zvatakaita kare. Kana tichifanira kudaro, zvakanaka chaizvo kuti titange kudzidza nezvechibayiro chaKristu cherudzikinuro. Kana tikadzidza, tofungisisa, uye tonyengetera nezvenyaya iyoyo inokurudzira, hatizonyanyi kunetseka nezvinhu zvatakakanganisa. Uyewo hatizombozvipi mhosva yezvivi zvatakatoregererwa naJehovha. Funga nezvechimwe chidzidzo chatinowana pana Pauro. Vamwe vangadaro vakasiya basa raigona kuita kuti vapfume kuti vaitire Jehovha zvakawanda. Kana zviri izvo zvatakaita, tinokwanisa here kukanganwa zvinhu zviri shure nekurega kufunga nezvemikana yatingadaro tisina kushandisa yekuwana pfuma? (Num. 11:4-6; Mup. 7:10) “Zvinhu zviri shure” zvinogonawo kusanganisira zvinhu zvatakaita mubasa raJehovha kana kuti matambudziko atakatsungirira kare. Ichokwadi kuti kufunga nezvekukomborerwa kwatakaitwa naJehovha uye kutitsigira kwaakaita kunogona kutiswededza pedyo naBaba vedu. Asi hatifaniri kubva tangogutsikana naizvozvo tichiona sekuti zvatakaita zvakakwana.—1 VaK. 15:58. w19.08 3 ¶5-6
Rambai muchinyengetera.—1 VaT. 5:17.
Tinogona kunyengetera kuna Mwari wedu chero nguva, pasinei nekuti tiri kupi. Hapana paanombowandirwa nezvekuita zvekuti anotadza kutiteerera. Kana tikaziva kuti Jehovha anoteerera minyengetero yedu, tinowedzera kumuda. “Ndinoda Jehovha”, akadaro munyori wepisarema, “nekuti anonzwa inzwi rangu.” (Pis. 116:1) Baba vedu vanoteerera minyengetero yedu uye vanoipindura. Muapostora Johani anotiudza kuti: “Pasinei nezvatinokumbira maererano nekuda [kwaMwari], iye anotinzwa.” (1 Joh. 5:14, 15) Jehovha angasapindura minyengetero yedu nenzira yatinotarisira. Anoziva zvakatinakira, saka dzimwe nguva mhinduro yake ndeyekuti kwete, kana kuti angada kuti tiimirire. (2 VaK. 12:7-9) Jehovha anotipa zvatinoda pakurarama. Anoita zvaanotarisira kuti vanababa vese vaite. (1 Tim. 5:8) Anopa vana vake zvavanoda pakurarama. Haadi kuti tizvidye mwoyo nezvekudya, zvekupfeka, kana kuti pekugara. (Mat. 6:32, 33; 7:11) Sezvo ari Baba vane rudo, Jehovha akaronga kuti tizowana zvese zvatichada mune ramangwana. w20.02 5 ¶10-12
[Achava] boka rimwe chete, aine mufudzi mumwe chete.—Joh. 10:16.
Havasi vese vane tariro yekurarama kudenga vari muboka ‘remuranda akatendeka, akangwara.’ (Mat. 24:45-47) Sezvavaingoita panguva yevaKristu vekutanga, Jehovha naJesu vachiri kupa vakawanda zvekudya kana kuti kudzidzisa vachishandisa hama shoma. Panguva yevaKristu vekutanga, vakazodzwa vashomanana ndivo vakashandiswa kunyora Magwaro echiKristu echiGiriki. Mazuva ano, vaKristu vakazodzwa vashomanana ndivo vane basa rekupa vanhu vaMwari ‘zvekudya panguva yakakodzera.’ Jehovha akasarudza kupa upenyu husingaperi kuvanhu vake vakawanda vachagara panyika uye upenyu hwekudenga kune vashoma vachatonga naJesu. Jehovha anokomborera vashumiri vake vese, angava “muJudha” kana “varume gumi,” uye anoda kuti vateerere mitemo mimwe chete, vachiramba vakatendeka. (Zek. 8:23) Vese vanofanira kuramba vachizvininipisa. Vese vanofanira kumushumira pamwe chete vakabatana. Uye vese vanofanira kushanda nesimba kuti muungano murambe muine rugare. Sezvatinoswedera pedyo nemugumo, ngatirambei tichishumira Jehovha tichitevera Kristu tiri “boka rimwe chete.” w20.01 31 ¶15-16
Kana paine vasingateereri shoko, vasvike pakuteerera pasina shoko rataurwa . . . nekuti vanenge vaona vega zvinhu zvakanaka zvamunoita uye kuremekedza kwenyu kukuru.—1 Pet. 3:1, 2.
Hatigoni kumanikidza hama dzedu kuti dzigamuchire mashoko akanaka, asi tinogona kuvakurudzira kuti vafunge zvinotaurwa neBhaibheri vozviteerera. (2 Tim. 3:14, 15) Ratidza muenzaniso wakanaka. Kakawanda hama dzedu dzinoona zvatinoita kupfuura zvatinotaura. Ramba uchiedza kubatsira hama dzako. Jehovha anotiratidza muenzaniso wakanaka panyaya iyi. Anogara achipa vanhu mukana wekugamuchira mashoko akanaka kuti vawane upenyu. (Jer. 44:4) Uye muapostora Pauro akaudza Timoti kuti arambe achibatsira vamwe. Nechikonzero chei? Nekuti kuita izvozvo kwaizoita kuti azviponese uye aponese vaya vaimuteerera. (1 Tim. 4:16) Tinoda hama dzedu, saka tinoda kuti dzizive chokwadi chiri muShoko raMwari. w19.08 14 ¶2; 16 ¶8-9
Kutsiurwa pachena kuri nani pane rudo runovanzwa.—Zvir. 27:5.
Tinofanira kuyeuka kuti munhu paanotipa zano, kazhinji kacho tinenge takanganisa kupfuura zvatiri kufunga. Pakadaro, tinganzwa tichida kuramba zano racho. Tinogona kushora munhu wacho kana kuti matauriro aanenge aita. Asi kana tichizvininipisa tichaedza kuva nemafungiro akanaka. Munhu anozvininipisa anogamuchira zano. Ngatitii uri pamusangano weungano. Pashure pekutaura nevanhu vakawanda vemuungano, mumwe wavo anokutora moenda padivi, obva akuudza kuti une kamuriwo pazino. Izvi zvinoita kuti unyare. Asi unotenda chaizvo kuti munhu wacho akuudza. Ungatoti dai paine akurumidza kuzviona andiudzawo. Ndizvowo zvatinofanira kuita kana hama kana hanzvadzi ikaita ushingi hwekutipa zano panguva yakakodzera. Tinofanira kuitenda. Tinoona munhu iyeye seshamwari yedu, kwete semuvengi.—Zvir. 27:6; VaG. 4:16. w19.09 5 ¶11-12
Mwanakomana wangu, chengeta murayiro wababa vako, uye usaramba kudzidzisa kwaamai vako.—Zvir. 6:20.
Jehovha akapa vanaamai basa rinokudzwa mumhuri, uye akavapa simba pavana vavo. Zvinoitwa naamai uye zvavanotaura zvinogona kubatsira vana vavo kweupenyu hwese. (Zvir. 22:6) Ngationei kuti vanaamai vanodzidzei pana Mariya, amai vaJesu. Mariya ainyatsoziva Magwaro. Airemekedza Jehovha chaizvo uye aiva neushamwari hwakasimba naye. Aida kuita zvinodiwa naJehovha kunyange zvazvo zvaireva kuti upenyu hwake hwese hwaizochinja. (Ruka 1:35-38, 46-55) Vanaamai, munogona kutevedzera Mariya munzira dzakasiyana-siyana. Mungazviita sei? Chekutanga, munogona kuramba muine ushamwari naJehovha kana muchidzidza Bhaibheri uye muchinyengetera. Chechipiri, munofanira kuva nechido chekuchinja upenyu hwenyu kuti mufadze Jehovha. w19.09 18 ¶17-19
Ndakaona boka guru revanhu.—Zvak. 7:9.
Muprofita Johani akapiwa chiratidzo chezvaizoitika mune ramangwana. Pane zvaakaratidzwa, anoona ngirozi dzichiudzwa kuti dzirambe dzakabata mhepo dzinoparadza dzekutambudzika kukuru kusvikira boka revaranda raiswa chisimbiso chekupedzisira. (Zvak. 7:1-3) Boka iri rine vanhu 144 000 vachatonga naJesu kudenga. (Ruka 12:32; Zvak. 7:4) Johani akabva ataura nezverimwe boka rakakura chaizvo achiti: “Ndakaona boka guru revanhu vakanga vasingakwanisi kuverengwa nemunhu, vanobva kumarudzi ese nemadzinza nevanhu nendimi, vamire pamberi pechigaro cheumambo nepamberi peGwayana.” (Zvak. 7:9-14) Johani anofanira kunge akafara chaizvo paakaziva kuti kwaizova nevanhu vakawanda vaizonamata Mwari nenzira yaanoda. Zvakaonekwa naJohani zvakasimbisa kutenda kwake. Isuwo kutenda kwedu kunosimbiswa zvakanyanya sezvo tiri kurarama panguva yekuzadzika kwezvaakaratidzwa. Tiri kuona vakawanda vachiuya kuzonamata Jehovha uye vanhu vacho vane tariro yekupona pakutambudzika kukuru vorarama nekusingaperi panyika. w19.09 26 ¶2-3
Vachabva vangoparadzwa pakarepo vasingatarisiri, . . . uye havasi kuzopukunyuka.—1 VaT. 5:3.
Fungidzira vatungamiriri venyika vachangobva kutaura mashoko ava nenguva refu akamirirwa ekuti “kwava nerunyararo uye hapana chichatiwana.” Vanogona kunge vachidada kuti nyika haisati yambova nerunyararo rwakadaro. Vanenge vachida kuti tifunge kuti vanokwanisa kupedza matambudziko ese ari panyika. Asi havazokwanisi kumisa zvinenge zvava kuda kuitika! “Bhabhironi Guru” richaparadzwa! (Zvak. 17:5, 15-18) “Mwari [achaisa] mumwoyo mavo kuti vaite zvaari kufunga.” Zvii izvozvo? Achange achifunga kuparadza zvitendero zvese zvenhema, kusanganisira chiKristu chenhema. Mwari achaisa zvaari kufunga mumwoyo ‘yenyanga gumi’ ‘dzechikara chitsvuku.’ Nyanga gumi dzinomiririra hurumende dzese dzinotsigira “chikara,” kureva Sangano Remubatanidzwa Wenyika Dzepasi Rese. (Zvak. 17:3, 11-13; 18:8) Kana hurumende idzodzo dzapandukira chitendero chenhema, ndiko kuchava kutanga kwekutambudzika kukuru. Izvi zvichangoerekana zvaitika uye zvichatyisa vanhu panyika. w19.10 14 ¶1, 3
Dhiyotrefesi uyo anoda kuva nechinzvimbo chepamusoro pakati pavo, haana chaanoremekedza pane zvese zvatinotaura.—3 Joh. 9.
Panguva yevaKristu vekutanga, Dhiyotrefesi ainzwira godo vaya vaitungamirira muungano yechiKristu. Aida “kuva nechinzvimbo chepamusoro” muungano, saka aitaura zvakaipa pamusoro pemuapostora Johani uye pamusoro pedzimwe hama dzaitungamirira. (3 Joh. 10) Kunyange zvazvo tisingazoiti zvakaitwa naDhiyotrefesi, isuwo tinogona kuitira shanje muKristu anenge apiwa basa rataifunga kuti tichapiwa, kunyanya kana tichiona sekuti tinokodzerawo kuita basa iroro. Shanje dzakaita sesora rinokanganisa zvirimwa. Kana dzangodzika midzi mumwoyo medu, zvinogona kutiomera kuti tidzibvise. Shanje dzinowedzera kana munhu aine godo, achizvikudza, uye achingofunga zvakamunakira. Dzinogona kutadzisa munhu kuti ave nerudo, tsitsi, uye mutsa. Kana tikangoona kuti shanje dzava kutanga kumera mumwoyo medu, tinofanira kubva tadzidzura. w20.02 15 ¶6-7
Ndakapiwa munzwa munyama.—2 VaK. 12:7.
Muapostora Pauro aireva kuti aiva nedambudziko raimurwadza. Akati dambudziko iri raiva “ngirozi yaSatani” yairamba ichimurova. Satani nemadhimoni ake vanogona kunge vasiri ivo vaikonzera dambudziko raPauro, iro rainge rakaita semunzwa uri munyama. Asi ngirozi idzi dzakaipa padzakaona “munzwa” wacho, dzinogona kunge dzaida chaizvo kuwedzera kuunyudza kuti Pauro awedzere kurwadziwa. Pauro akaitei? Pakutanga, Pauro aida kuti Jehovha amubvisire “munzwa” wacho. Akati: “Ndakakumbira Ishe [Jehovha] katatu kese kuti ubve.” Asi pasinei nekunyengetera kwaakaita, munzwa wacho wakaramba uripo. Izvi zvinoreva here kuti Jehovha haana kupindura minyengetero yaPauro? Aiwa. Akaipindura. Haana kubvisa dambudziko racho, asi akapa Pauro simba rekutsungirira. Jehovha akati: “Simba rangu riri kuitwa kuti rive rakakwana mukusava kwako nesimba.” (2 VaK. 12:8, 9) Achibatsirwa naMwari, Pauro akaramba achifara uye akagadzikana!—VaF. 4:4-7. w19.11 9 ¶4-5
Jehovha ndiMwari anoda kuzvipira kwakazara.—Nah. 1:2.
Jehovha ndiye chete watinofanira kunamata nekuti ndiye akatisika uye akatipa upenyu. (Zvak. 4:11) Asi pane zvatinofanira kungwarira. Kunyange zvazvo tichida Jehovha uye tichimuremekedza, pane zvinhu zvinogona kutitadzisa kuzvipira zvakazara kwaari. Bhaibheri parinotaura nezvekuzvipira kuna Mwari rinenge richireva kumuda zvakadzama. Kana takazvipira zvakazara kuna Jehovha, tinonamata iye chete. Hatizobvumiri mumwe munhu kana chimwe chinhu kutora nzvimbo yake mumwoyo medu. (Eks. 34:14) Takazvipira kuna Jehovha pasina chikonzero here? Aiwa. Kuzvipira kwedu kunobva pane zvatakadzidza nezvake. Takasvika pakuyemura zvaari. Tinoziva zvaanoda nezvaasingadi uye manzwiro ake ndiwo atinoitawo. Tinoziva kuti akatisikirei uye tinorarama maererano nechinangwa ichocho. Tinofara chaizvo kuti anotibvumira kuti tive shamwari dzake. (Pis. 25:14) Zvese zvatinodzidza nezveMusiki wedu zvinoita kuti tiswedere pedyo naye.—Jak. 4:8. w19.10 26 ¶1-3
Shamwari yechokwadi ine rudo nguva dzese uye ihama yakaberekerwa kubatsira panguva yekutambudzika.—Zvir. 17:17.
Mazuva ano, vatinonamata navo vanosangana nematambudziko akasiyana-siyana. Semuenzaniso, vakawanda vanowirwa nenjodzi dzinongoitika dzega kana kuti dzinokonzerwa nevanhu. Izvozvo pazvinoitika, vamwe vedu tinogona kugara neshamwari idzi pamba pedu. Vamwe vangabatsira nemari. Asi tese zvedu tinogona kukumbira Jehovha kuti abatsire hama nehanzvadzi dzedu. Kana hama kana hanzvadzi yedu yakaora mwoyo, tingasaziva zvekutaura kana zvekuita. Asi tese tine zvatingaita kuti tibatsire. Semuenzaniso, tinogona kutsvaga nguva yekuva neshamwari yedu. Tinogona kunyatsoiteerera painenge ichitaura. Uye tinogona kutaura nayo nezverugwaro rwatinofarira runonyaradza. (Isa. 50:4) Chinonyanya kukosha ndechekuti uve neshamwari dzako padzinenge dziri mumatambudziko. Tinofanira kuumba ushamwari hwakasimba nehama nehanzvadzi dzedu iye zvino toshanda nesimba kuti ushamwari hwacho hurambe huripo. Ushamwari ihwohwo huchatoramba huripo kusvika pakuguma kwenyika ino uyewo nekusingaperi. w19.11 7 ¶18-19
Uyu ndiwo mutemo wechibayiro cherugare chingauya nemunhu kuna Jehovha.—Revh. 7:11.
Ichi chaiva chibayiro chaipiwa nemunhu achizvidira hake nekuti aida Mwari wake, Jehovha. Nyama yemhuka inenge yapiwa sechibayiro yaidyiwa nemunhu wacho anenge apa, mhuri yake, uye vapristi. Asi pane dzimwe nhengo dzemhuka yacho dzaingopiwa Jehovha chete. Jehovha aiona mafuta emhuka seanokosha kupfuura imwe nyama yese. Akataurawo kuti dzimwe nhengo dzakadai seitsvo dzaikosha chaizvo. (Revh. 3:6, 12, 14-16) Saka Jehovha aifara chaizvo kana muIsraeri akazvisarudzira ega kumupa nhengo idzodzo pamwe chete nemafuta. MuIsraeri paaipa zvinhu izvozvo, airatidza chido chake chekupa Mwari zvakanakisisa. Izvi ndizvo zvakaitwa naJesu. Akapa Jehovha zvakanakisisa achizvidira kuburikidza nekumushumira nemweya wese nekuti aimuda. (Joh. 14:31) Jesu aifarira kuita kuda kwaMwari. (Pis. 40:8) Jehovha anofanira kunge aifara chaizvo paaiona Jesu achimushumira nekuzvidira! w19.11 22-23 ¶9-10
Zuva rechinomwe isabata rekuzorora zvakakwana. Iro chinhu chitsvene kuna Jehovha.—Eks. 31:15.
Shoko raMwari rinoti pashure ‘pemazuva’ 6 ekusika, Mwari akamira kusika zvinhu panyika. (Gen. 2:2) Kunyange zvakadaro, Jehovha anoda kushanda, uye ‘achiri kushanda.’ (Joh. 5:17) Sabata raichengetwa nevaIsraeri vhiki rega rega raiva neparakafanana nekuzorora kwakaita Jehovha kunotaurwa muna Genesisi. Mwari akati Sabata raiva chiratidzo pakati pake nevaIsraeri. (Eks. 31:12-14) Hapana aifanira kushanda, kusanganisira vana, varanda, uye kunyange zvipfuwo. (Eks. 20:10) Izvi zvaipa vanhu nguva yakawanda yekudzidza nezvaJehovha. Vatungamiriri vechitendero vakawanda vepanguva yaJesu vaidzika mitemo yaiita kuti kuchengeta Sabata kuome. Vaiti zvaisabvumirwa nemutemo kuti munhu atemhe hura dzezviyo kuti adye kana kuti aporese munhu anorwara paSabata. (Mako 2:23-27; 3:2-5) Maonero akadaro aisaratidza mafungiro aMwari, uye Jesu aijekesa izvozvo kuvanhu vaimuteerera. w19.12 3-4 ¶8-9
Ivai vatevedzeri vaMwari, sevana vanodiwa.—VaEf. 5:1.
Patinoramba tichidzidza nezvaJehovha, zvinotiitira nyore kumutevedzera. Dhavhidhi akanga ava kunyatsoziva Baba vake vekudenga, saka aikwanisa kuvatevedzera pamabatiro aaiita vamwe. Sezvo Dhavhidhi aiva shamwari yaJehovha yepedyo, akava pakati pemadzimambo aidiwa chaizvo nevaIsraeri, uye Jehovha aiyera mamwe madzimambo eIsraeri achishandisa muenzaniso waDhavhidhi. (1 Madz. 15:11; 2 Madz. 14:1-3) Tinodzidzei? Tinofanira kuva “vatevedzeri vaMwari.” Kana tikatevedzera Mwari, tinenge tichiratidzawo kuti tiri vana vake. (VaEf. 4:24) Hatizombopedzi kudzidza nezvaJehovha. (Mup. 3:11) Kungoziva zvakawanda nezvake hakuna kukwana. Tinofanira kuona kuti tiri kuitei nezvatinoziva zvacho. Kana tikaita zvatinenge tadzidza, toedza kutevedzera Baba vedu vane rudo, ivo vacharamba vachiswedera pedyo nesu. (Jak. 4:8) Shoko rake rinotiudza kuti haazombosiyi vaya vanomutsvaga. w19.12 20 ¶20; 21 ¶21, 23
Mwoyo unonyengera kupfuura zvinhu zvese.—Jer. 17:9.
Jakobho aida vanakomana vake vese, asi ainyanya kuda Josefa uyo aiva nemakore 17. Vakoma vaJosefa vakaita sei nazvo? Vakamuitira shanje, uye vakabva vatanga kumuvenga. Saka vakamutengesa kuti ave muranda, vachibva vazonyepera baba vavo kuti akaurayiwa nechikara. Shanje dzakaita kuti vakanganise rugare mumhuri mavo uye vashungurudze baba vavo zvisingaiti. (Gen. 37:3, 4, 27-34) Shanje kana kuti godo, dzakanyorwa pamwe chete ‘nemabasa enyama’ ayo anotadzisa munhu kugara nhaka yeUmambo hwaMwari. (VaG. 5:19-21) Shanje ndidzo dzinowanzokonzera zvinhu zvakaipa zvakadai ‘sekuvengana, kupopotedzana, uye kuviruka nehasha.’ Zvakaitwa nevakoma vaJosefa zvinoratidza kuti shanje dzinokonzera sei ruvengo uye kuti dzinokanganisa sei rugare rwemhuri. Kunyange zvazvo tingasaita zvakaitwa nevakoma vaJosefa, tese tine mwoyo une chivi uye unonyengera. Ndosaka dzimwe nguva tichimboitira vamwe shanje. w20.02 14 ¶1-3
Zvininipisei muchiona vamwe sevakuru kwamuri.—VaF. 2:3.
Jehovha akambobvisa mumwe mweya wake pana Mozisi, akauisa pavakuru vechiIsraeri vainge vakamira pedyo netende rekusanganira. Izvozvo zvichangobva kuitika, Mozisi akazonzwa kuti vamwe vakuru vaviri avo vainge vasina kuenda kutende rekusanganira vainge vagamuchirawo mweya mutsvene vachibva vatanga kuita sevaprofita. Akaita sei Joshua paakamuti arambidze vakuru vaviri ivavo kuprofita? Haana kuvaitira shanje nekushandiswa kwavaiitwa naJehovha. Asi akafara nekuti vainge vava kuprofita. (Num. 11:24-29) Tinodzidzei kubva pane zvakaitwa naMozisi? Kana uri mukuru, wakambokumbirwa here kuti udzidzise mumwe munhu kuti aite rimwe basa rauri kuita uye raunoda chaizvo muungano? Kana uchizvininipisa saMozisi, hauzonzwi sekuti hauchakoshi kana ukakumbirwa kuti udzidzise mumwe munhu kuti azokwanisawo kuita basa racho. Asi uchabatsira hama yako uchifara. w20.02 15 ¶9; 17 ¶10-11
Kunetseka kuri mumwoyo wemunhu kunouremedza, asi shoko rakanaka rinoita kuti unyevenuke.—Zvir. 12:25.
Kurwara kugona kuita kuti tishushikane chaizvo. Tinogona kunetseka vanhu pavanoona kuti utano hwedu hauna kumira zvakanaka, kana kuti patinenge tava kungomirira kuti vamwe vatibatsire. Kunyange vamwe pavanenge vasingazivi kuti tiri kurwara, tinogona kunyara nekuti hatichakwanisi kuita zvimwe zvinhu zvataimboita. Pakadaro, Jehovha anotisimbisa! Anozviita sei? MuBhaibheri, Jehovha anotiudza mashoko akanaka anotibatsira kuona kuti tinokosha kwaari pasinei nekuti tiri kurwara. (Pis. 31:19; 41:3) Nemashoko iwayo akafemerwa, Jehovha achatibatsira patinenge tichishushikana nekurwara kwatinenge tichiita. Iva nechokwadi chekuti Jehovha anoziva kurwadziwa kwauri kuita. Nyengetera kwaari nemwoyo wese kuti akubatsire kuti uve nemaonero akanaka padambudziko rako. Chibva waverenga mashoko akanaka awakachengeterwa naJehovha muBhaibheri. Isa pfungwa pamavhesi anoratidza kuti Jehovha anokoshesa vashumiri vake. Kana ukadaro uchaona kuti Jehovha akanaka kune vese vanomushumira vakatendeka.—Pis. 84:11. w20.01 15-16 ¶9-10,12
Usatevedzera zvinhu zvakaipa, asi tevedzera zvinhu zvakanaka.—3 Joh. 11.
Isaka akanga ari mupfumi, uye vaFiristiya vaichiva upfumi hwake. (Gen. 26:12-14) Vakatofushira matsime aaichera mvura yekupa zvipfuwo zvake. (Gen. 26:15, 16, 27) Mazuva ano vamwe vanhu vanoitira shanje vaya vane pfuma yakawanda kudarika yavo sezvaiitwa nevaFiristiya. Vanoda zvinhu zvevamwe uyewo vanoda kuti vanhu ivavo vasava nazvo. Vatungamiriri vechitendero vechiJudha vaiitira Jesu shanje nekuti aifarirwa nevanhu vakawanda. (Mat. 7:28, 29) Jesu aiva mumiririri waMwari, uye aidzidzisa chokwadi. Kunyange zvakadaro, vatungamiriri ivavo vaiudza vanhu manyepo pamusoro paJesu uye vaitaura zvakaipa nezvake kuti vasvibise zita rake. (Mako 15:10; Joh. 11:47, 48; 12:12, 13, 19) Tinodzidzei pane izvi? Tinofanira kurwisa kuti tisaitira shanje vaya vane unhu hwakanaka hunoita kuti vafarirwe neungano. Asi tinofanira kuedza kutevedzera rudo rwavanoratidza vamwe.—1 VaK. 11:1. w20.02 15 ¶4-5
Anofanira kuurayiwa.—Est. 4:11.
Chimbofungidzira uchigara muPezhiya makore anenge 2 500 akapfuura uye unoda kutaura namambo. Kuti usvike kuna mambo wacho unofanira kutanga wapiwa mvumo. Kana ukasadaro unogona kuurayiwa! Tinotenda chaizvo kuti Jehovha akasiyana namambo iyeye wePezhiya! Tinogona kutaura naye chero nguva. Anoda kuti tinzwe takasununguka kutaura naye. Kunyange zvazvo Jehovha aine mazita anoratidza ukuru hwake akadai sekuti, Musiki Anokudzwa, Wemasimbaose, uye Changamire Ishe, anoda kuti timudane kuti “Baba.” (Mat. 6:9) Zvinotifadza chaizvo kuti Jehovha anoda kuti tinzwe tiri pedyo naye saizvozvo! Zvakakodzera kuti tidane Jehovha kuti “Baba” nekuti ndiye akatipa upenyu. (Pis. 36:9) Tinofanira kumuteerera nekuti ndiye Baba vedu. Kana tikaita zvaanoda kuti tiite, tichawana makomborero. (VaH. 12:9) Makomborero iwayo anosanganisira upenyu husingaperi kudenga kana kuti panyika. w20.02 2 ¶1-3
Itai] vadzidzi.—Mat. 28:19.
Chinangwa chedu ndechekubatsira mudzidzi wedu kuti akure pakunamata. (VaEf. 4:13) Munhu paanobvuma kudzidza Bhaibheri, chinangwa chake chikuru chinenge chiri chekuti kudzidza kwacho kumubatsire iye pachake. Asi kuda kwaanoita Jehovha pakunowedzera, anogona kutanga kufunga nezvekubatsira vamwe, kusanganisira vaya vatori muungano. (Mat. 22:37-39) Panguva yakakodzera, udza mudzidzi wako nezveropafadzo yekupa mari yekutsigira basa reUmambo. Dzidzisa mudzidzi wako zvekuita panomuka matambudziko. Ngatitii mudzidzi wako, uyo ari muparidzi asati abhabhatidzwa, akuudza kuti akagumburwa nemumwe munhu ari muungano. Pane kumuudza kuti ndiani akakanganisa pauviri hwavo, mutsanangurire zvinotaurwa neBhaibheri kuti anofanira kuita. Anogona kuregerera hama yacho, kana kuti kana asingakwanisi kungosiya nyaya yacho yakadaro, anofanira kutaura nemunhu wacho zvakanaka nechinangwa chekuva nerugare nehama yacho. (Enzanisa naMateu 18:15.) Batsira mudzidzi wako kugadzirira zvaachataura zvacho. w20.01 5 ¶14-15
Ndakazoreurura chivi changu kwamuri; handina kufukidza kukanganisa kwangu. . . . Uye makaregerera kukanganisa kwangu uye zvivi zvangu.—Pis. 32:5.
Tinoratidza kuti tinokoshesa kuregerera kunoita Jehovha kana tikanyengetera tichikumbira kuti atiregerere, tobvuma kurangwa, uye toshanda nesimba kuti tisadzokorora zvatakakanganisa. Kutora matanho aya kuchaita kuti tivezve nerugare. Zvinokurudzira chaizvo kuziva kuti, “Jehovha ari pedyo nevaya vakaora mwoyo; anoponesa vaya vakasuruvara.” (Pis. 34:18) Sezvo tava kusvika kumugumo, matambudziko acharamba achiwedzera. Paunenge uchizvidya mwoyo usanonoka kunyengetera kuna Jehovha kuti akubatsire. Dzidza Bhaibheri nesimba. Dzidza pamuenzaniso waHana, muapostora Pauro, naMambo Dhavhidhi. Kumbira Baba vako vekudenga kuti vakubatsire kuti uzive zviri kukudya mwoyo. (Pis. 139:23) Bvuma kuti vakubatsire pamatambudziko ako, kunyanya aya ausingagoni kunzvenga kana kupedza. Kana ukadaro, unogona kunzwa sezvakaita munyori wepisarema uyo akaimbira Jehovha kuti: “Pandakawandirwa nezvaindidya mwoyo, makandinyaradza uye makandizorodza.”—Pis. 94:19. w20.02 24 ¶17; 25 ¶20-21
Magwaro ese akafemerwa naMwari.—2 Tim. 3:16.
Mwari ‘akafemera’ pfungwa dzake muvanyori veBhaibheri achishandisa mweya wake mutsvene. Patinoverenga Bhaibheri tofungisisa zvatinenge taverenga, mirayiro yaMwari inopinda mupfungwa dzedu nemumwoyo. Inoita kuti tirarame sezvinodiwa naMwari. (VaH. 4:12) Asi kuti tinyatsobatsirwa nemweya mutsvene, tinofanira kuwana nguva yekuti tigare tichidzidza Bhaibheri, uye kufungisisa zvatinenge taverenga. Kana tikadaro, Shoko raMwari rinotitungamirira pane zvese zvatinotaura uye zvatinoita. Uyewo tinofanira kunamata Mwari tiri pamwe chete nevamwe. (Pis. 22:22) Mweya waJehovha unenge uripo pamisangano yedu. (Zvak. 2:29) Patinoungana kuti tinamate nevamwe vaKristu, tinonyengeterera mweya mutsvene, tinoimba nziyo dzeUmambo dzine mashoko akabva muBhaibheri, uye tinodzidziswa Shoko raMwari nehama dzakagadzwa nemweya mutsvene. Kuti tinyatsobatsirwa nemweya mutsvene, tinofanira kuuya kumisangano takagadzirira kuzopindurawo. w19.11 11 ¶13-14